Ny rafitra Zoroastrian zokiolona tranainy dia hanampy anao hahita ireo tsiambaratelon'ny anjaranao
tonon'andro, interesnenkoe / From Poster
Ny olona tsirairay avy na ny iray hafa dia maniry ny hahafantatra ny tena. Ary matetika no manampy antsika amin'ny fikarohana ny fanandroana sy ny tondra-drano isan-karazany. Androany dia hiresaka momba ny zokiolona indrindra amin'ireo rafitra ireo isika - Zoroastrian. Manambara amin'ny olombelona ny biby toteminy izy. Tsy manampy fotsiny izany
Horoscope ho an'ny taona
tonon'andro / From Poster
Ny fahadisoana dia miankina amin'ny taona mora sy mahafinaritra, miandry ny hetsika tsy tapaka. Tsy azo atao mihitsy ny misoroka ny korontana sy ny olana, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny orinasa, izay tsy dia tsotra loatra ary tsy misy dikany ny zava-drehetra, araka ny efa hitantsika teo aloha. Andeha isika hanasongadina hevitra manan-danja vitsivitsy izay mamaritra ity taona ity: Ny olana taloha indray dia mahatsiaro tena ho tsinjo izany fa tsy ny tsy fahampiana fotsiny ...
Horoscope ho an'ny taona Read full »